Ten Hag oo go’aan ka gaaray mustaqbalka Harry Maguire ee kooxda Man United – Gool FM
Ten Hag oo go’aan ka gaaray mustaqbalka Harry Maguire ee kooxda Man United
Dajiye June 22, 2022
(Manchester) 22 Juun 2022. Tababaraha cusub ee Manchester United Erik ten Hag ayaa go’aamiyay mustaqbalka daafaca rugcadaaga ah ee Harry Maguire.
Wargeysyada Ingiriiska ayaa tilmaamayay suurtagalnimada ah in Harry Maguire uu ka tago Red Devils xagaagan, waxayna arrintan timid kaddib heerarka kala duwan uu ku soo bandhigay Man United xilli ciyaareedkii hore.
Haddaba Sida laga soo xigtay warbixin uu daabacay wargeyska Ingiriiska ee Daily Mail, Erik ten Hag ayaa qorsheynaya inuu Maguire ka dhigo mid ka mid ah daafacyadiisa isagoo ka garab ciyaaraya Raphaël Varane iyo Victor Lindelöf.
Wargeyskan ka soo baxa England ayaa wuxuu sidoo kale carabka ku adkeeyay, in arinta calaamada kabtanimada ay wali taagan tahay iyadoo la eegayo suurtogalnimada ahin calaamada lagala noqdo Maguire, Cristiano Ronaldo ayaana u muuqda mid ka mid ah musharaxiinta ugu cad cad ee xilkan cusub.
Warbixintan ayaa tilmaamtay in United ay raadin doonto inay lasoo saxiixato daafac cusub hadii ay ka fasaxdo Eric Bailly, Phil Jones ama Axel Tuanzebe.
Maguire ayaa u wareegay Red Devils sanadkii 2019 isaga oo kaga soo biiray Leicester City, tan iyo markaas waxa uu kooxda matalay 144 kulan oo tartamada oo dhan ah isaga oo u dhaliyay 7 gool, wuxuuna caawiyay 5 gool, sidoo kale xulka qaranka England ayuu u ciyaaray 46 kulan oo heer caalami ah.
Arsenal oo xiiseyneysa saxiixa xiddig bar-tilmaameed buuxa u ah Barcelona